Uncategorized – Page2– JQY's Blog
ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် အလှူငွေနှင့် ပစ္စည်းများ အလှူခံရရှိမှု စာရင်း
အလှူရှင်နှင့် အလှူငွေများစာရင်း ၁။ ကိုအောင်လင်းကျော် (သြစတေးလျှ) ………………… ၁၂၀၀၀၀ ၂။ အင်းတော်ရှမ်း ……………………………………………….. ၁၁၀၀၀၀ ၃။ ပန်းသခင် (ထိုင်ဝမ်) ………………………………………… ၁၀၀၀၀၀ ၄။ လှမျိုးအောင် ([email protected]) …………………………… ၅၀၀၀၀ ၅။ သီတာအောင်သန်း(ခ)ဝိုင်းလေး (မြစ်ကြီးနား) …………. ၅၀၀၀၀ ၆။ ရဲသီဟ ………………………………………………………………. ၅၀၀၀၀
ခြောက်ကြိမ်မြောက် အလှူမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
အခမ်းအနားမှာ ချိတ်ထားတဲ့ Vinyl ပါ။ အောင်တော်မူ စုရပ်မှ မထွက်ခွာမီ အချို့လည်း ကြိုရောက်နှင့်နေကြတယ် ဟောပြောပွဲမှာ ဟောပြောမယ့် ဆရာကိုသာဇော် (Shade ဂျာနယ်-တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ) နှင့် Blogger ကိုပေါက် (မန္တလေး) အလှူဖြစ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့ အက်ဒမင်များ တက်ရောက်လာကြသူများ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များကို ရေခဲမုန့်ဖြင့် ဧည့်ခံစဉ် ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စာအုပ်၊
အောင်တော်မူ စနေနေ့ ဝေယျာဝစ္စအသင်း
မန္တလေးမြို့ ၊ အောင်တော်မူ ရင်ပြင်တော်တွင် စနေနေ့ ဝေယျာဝစ္စအသင်းတစ်ခု ထပ်မံ ဖွဲ့လိုက်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များက BEC ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ထိုအဖွဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာသူငယ်ချင်းများနေ့မှ စနေနေ့ တစ်ရက်တည်းသာ အားလပ်ရက် ရှိကြသော အဖွဲ့ဝင်များ မည်သူ မဆို ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ တံမျက်စည်းလှည်းပြီးနောက် ကြမ်းတိုက်ကြစဉ်
ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိ သင်ကြားနေတဲ့ နွေရာသီ ဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်းကို လာရောက် လေ့လာစဉ် ပအိုဝ်းဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင် မင်းသမီး တဖြစ်လဲ မူကြိုကျောင်းဆရာမလေး ဒေါ်သဇင်ကြည်မှ အစီအစဉ်များကို ဖတ်ကြားစဉ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်းသူ နန်းမူလေးမှ လာရောက်လေ့လာသော ပင်လောင်းအဖွဲ့အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားစဉ် လာရောက်လေ့လာသော ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ မှ လာရောက်လေ့လာခွင့်ရသည့်အတွက်
အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းချိန် ဓာတ်ပုံများ ဒါက အင်္ဂလိပ်ချိန်ပါ။ မနားရအောင် နောက် ဘာသင်တန်းတွေ ပို့ချတယ်။ ဘာတွေ လုပ်တယ်ဆိုတာကို ဓာတ်ပုံနှင့် တင်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
သင်တန်းဖွင့်ပွဲ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အစီအစဉ်ကို ကြေငြာစဉ် သင်တန်းမှူးမှ သြ၀ါဒပေးစဉ် သင်တန်းသားများ သင်တန်းမှ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများကို ဖတ်ပြစဉ် သင်တန်းအချိန်ဇယားကို ဖတ်ပြစဉ် ကွန်ပျူတာ သင်ကြားစဉ်
အလှူခံမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိသလို အလှူရှင်မှာလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ အလှူခံဘက်ကို မငဲ့ဘဲနဲ့ ကိုယ်က လှူမယ့်သူဆိုရင် ဘယ်လို လှူသင့်တယ်။ ဘယ်လိုလှူရင် ပိုအကျိုးရှိတယ် ဆိုတာလေးကိုတော့ သိထားသင့်ပါတယ်။ အဲဒီ အကြောင်းလေးကို ပြောချင်ပါတယ်။ အလှူဒါနပြုရာမှာ လှူတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အသုံးပြုလို့ မြင်တွေ့လို့ရတဲ့ အလှူကို လှူတာရယ်နှင့် အသိဉာဏ်ကိုလှူတဲ့ အလှူဖြစ်ပါတယ်။ စာသင်ခြင်း၊